Momba anay | Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd.
Kalitao avo, fanamorana, vidiny ambany ary tombom-barotra ambany
Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 1997, dia miorina ao amin'ny faritany Shijiazhuang-Hebei - faribolana ara-toekarena lehibe indrindra sy mavitrika indrindra amin'ny fampiroboroboana beijing-tianjin-hebei, ny fahafaha-mamokatra betsaka ny kabine mahazatra sy ambony savony, savony fanasan-damba, savony savony, lakozia sy mpanadio fidiovana mpanamboatra matihanina, ny orinasa dia manana andalana famokarana maoderina sivy, mihoatra ny 30 mpiasa matihanina sy ara-teknika, injeniera zokiny telo, mpiasa maherin'ny 200 ao amin'ny orinasa. Tamin'ny taona 2012, nanitatra sy nahavita atrikasa fanasana rano mandeha ho azy ny orinasanay, atrikasa fanasana an-dakozia aseptika, atrikasa fidiovana tsy misy vovoka ary atrikasa savony fanondranana. Ny vokatra dia amidy eran'ny faritany, tanàna, distrika ary tsena ivelany.
Baiyun co cozimique isan'andro., LTD dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitry ny famokarana "miompana amin'ny mpanjifa, kalitao ho an'ny fahavelomana, avo lenta ny fandresena, marina tsara amin'ny vaovao", amin'ny famolavolana vokatra lamaody, akora madio ary teknolojia famokarana mandroso, hany ka ny azo antoka sy mahasalama ny vokatra, araho ny The Times, akaikin'ny fangatahan'ny tsena. Tamin'ny taona 2009, ny orinasanay dia nahomby tamin'ny ISO9001: 2000 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena sy fanamarinana ny kalitaon'ny QS, ary nanoratra sy namolavola ny marika manokana: "Jingjiu express", "ruichi", "ruibai", "baiyunjiaxu", "Reebay", "Deemax" sns. Ny orinasa dia manana famoahana savony 10000 taonina isan-taona, 50000 taonina ny vokatra famokarana rano manadio.
Ny politikam-piasan'ny "kalitao avo lenta, fanamariam-bola, vidiny ambany ary tombony ambany" dia ahafahan'ny orinasanay mamorona rafitra firafitry ny vokatra avo, salantsalany ary ambany hamaly ny filan'ny firenena, tsena ary vondrona mpanjifa isan-karazany. Tena handray soa ny vahoaka. Miaraka amin'ny foto-kevitry ny fitantanana ny "famolavolana ny sary ety ivelany sy ny fanamafisana ny kalitao ao anatiny", nomena ny anaram-boninahitra amam-boninahitra ny "vidiam-bola azo itokisana", "singa azo itokisana ny kalitaon'ny vokatra", "orinasa mpampindram-bola AAA" ary "vokatra tsara kalitao" nandritra ny taona maro.
"Ento ny vokatra Baiyun any amin'ny tokantrano an'arivony erak'izao tontolo izao" dia ny fikatsahantsika tsy tapaka ny foto-kevitra momba ny varotra, ny vokatra any Chine hitazonana fahombiazana amin'ny varotra tsara, ary ankehitriny dia nahavita nanangana tambajotram-barotra eran-tany izahay, nanarona an'i Amerika atsimo ny tambajotra. Eoropa, Afrika, Oseania, Azia atsimo atsinanana ary Moyen Orient. Manana ekipa mpamokatra savony matihanina izahay, mpiasan'ny varotra matihanina, mpanolotsaina aorinan'ny varotra matihanina, vonona hampiasa ny vokatra avo lenta ho an'ny matihanina, ho an'ny fianakaviana an-jatony tapitrisa eran'izao tontolo izao. Manantena ny hiara-hiasa amin'ny mpanjifa manerantany izahay mba hamoronana ho avy tsaratsara kokoa.